စာပဒေသာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 528
၀တ်မှုန် (စင်ကာပူ) စက်တင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၂ သြဂုတ်လ၊ ၂၀၁၂ မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းမြို့ကြီးများရေကြီးစဉ် ဒီဓါတ်ပုံထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ကလေးများဟာ ၀၀ဖြိုးဖြိုးလေး ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ အဟာရဓါတ် ပြန်လည်တိုးတက်လာပြီလို့ မှတ်ယူရပါတယ်။ သို့သော် ဒါလောက် ယင်ကောင်များစွာကြားမှာ ကလေးများအိပ်နေကြခြင်းအတွက် စဉ်းစားစရာများစွာ ရှိပါတယ်။ ပြသနာတခုကို အဖြေရှာတဲ့အခါ ပထမဆုံး လူတိုင်းဖြေရှင်းတဲ့နည်းက အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ စတင်လေ့ရှိပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့လူများကတော့ ပြသနာကို အရင်ချကြည့်လိုက်ပါတယ်။ Problem Description လို့ခေါ်ပါတယ်။ What, Where, When, Who, Why, How ..စတဲ့ ဒဘလျူတွေနဲ့ ကိုယ်အဖွဲ့သားတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေ အနာလိုက်စ် လိုပ်ကြပါတယ်။ ပြီးမှ အဲဒီပြသနာကို ယာယီဖြေရှင်းနည်း Containment Action...
ကျော်မိုး (စကားဝါမြေ) စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၂ လူ့ဘဝနေလာတဲ့ နှစ်တွေမယ် အတွေးတွေက ဝဲလိုလယ် အလွမ်းအဆွေးတွေက အသွယ်သွယ် အမှန်တရားရှိဖို့က အလှမ်းဝေးနေတယ်။ အခွင့်သာလို့ လူဖြစ်ကြုံ တွေ့ဆုံကြုံကွဲ လူမှုဝန်းကျင်ထဲ ကန္တာရထဲကသစ်ပင်လို ကြိုးစားအသက်ရှင် ညှိုးတစ်ခါ လန်းတစ်လှည့် စိတ်မှာ ဒဏ်ရာများနဲ့ပြည့်ခဲ့။ အသားစားကျားနဲ့တောခွေးတွေပေါတဲ့ ဟောဒီ့ ပတ်ဝန်းကျင် ဒို့အသက်ရှင်မှုက သားသမင်လို အမြဲထိတ်လန့် ကျီးလန့်စာစား ဘဝကို ခက်ခဲစွာမွေးဖွားလျှက်။ နှစ်တွေကြာဆွေးမြေ့ ဘဝရဲ့ အချိုးအကွေ့တွေများ ငါဆိုတဲ့ အတ္တတံတားကိုခင်း ရဲရဲကြီးလျှောက်နင်း ဖောက်ပြန်ခြင်းစိတ်တွေသာပိုင်ခဲ့ ခြေလှမ်းတွေယိုင်နှဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ မဲ့လုမတတ်။ တည့်မတ်ပေးမည့်သူ အကူရှာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူညာတွေပဲရှိ ကျုပ်တို့က အများကောင်းစားရေးလုပ်တာပြော “ကြက်ဆူတောမှာ မင်းမူ” “သခွပ်ပင်က မီးတကျီကျီ” အော်တတ်သူတွေလည်းရှိ အမှန်တရားဆိုတာ...
ကဲနေမူး စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ငယ်ငယ်က ကျနော်ဆေးလိပ်သောက်တော့ အဖေကတားတယ် … မကောင်းဘူးတဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ဘူးတာကိုး …။ ၈၈ မှာ ကျနော်တောခိုတော့ အဖေက မကောင်းဘူးသား မတားခဲ့နိုင်ရှာ .. သူမှ တောမခိုဘူးတာကိုး …။ အနှစ် ၂၀ ကျော် အိမ်ပြန်ချင်သော ကူညီလို့ရတယ်နော် မာယာရှင်စစ်သား မဲ့မသွားအောင် သတိဆောင်ကာ အဖေ့ခမျာ ရေငုံ နှုတ်ပိတ် ပြန်မပြောနိုင်ရှာဘူး သူမှ စစ်မတိုက်ဘူးတာကိုး …။ သြော် … အဖေရယ် ဆေးလိပ်အန္တရာ်၊ တောခို ခြင်ကိုက် စစ်တိုက်တဲ့အခါ စစ်မြေပြင်ကမ္ဘာ စစ်သားစိတ်မှာ အရင်ပစ်မလား အပစ်ခံမလား နှစ်ခုပဲစဉ်းစား ကျနော် ပြန်သင့်သလား …။ No tags for...
ဇော်အောင် စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ● နိဒါန်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျင်းပသော မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့သည့် AFC U-22 ချန်ပီယံရှစ် ခြေစစ်ပွဲ (Group-G) ပွဲစဉ်များတွင် ပရိသတ်နှင့် မြန်မာဘော်လုံးအဖွဲ့ချုပ်တို့ဖြစ်ပျက်ပုံများ၊ အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က ၅ ပွဲတွင် ၄ ပွဲ ပရိတ်သတ်မထိန်းနိုင်မှုကြောင့် မြန်မာဘော လုံး အဖွဲ့ချုပ်ကို ဒဏ်ငွေစုစေုပေါင်း ဒေါ်လာ ၂၈၀၀၀ (နှစ်သောင်းရှစ်ထောင်) ဒဏ်ရိုက်လိုက်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အနေ ဖြင့် AFC ၏ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခြင်းအပေါ် အယူခံဝင်သွားမည်မဟုတ်ပဲ ဒဏ်ငွေစုစုပေါင်း (၂၈၀၀၀) ကိုပေးဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏မီဒီယာဒါရိုက်တာ ဦးစိုးမိုးကျော်က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က စိတ်ပျက်စွာဖြင့် မြန်မာတွေ ဒါလောက် ပစ္စလက်ခတ်နိုင်တာ ဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာလဲဟု မေးခွန်းထုတ်သည်။ ● ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံတခု ကျွန်တော် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ...
ကမာပုလဲ စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂ မနေ့က အမေရိကန်မှာ ရောက်ရှိသောင်တင်နေသူ စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ မောင်စွမ်းရည်ကို ဖေ့စ်ဘွခ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ မှတ်မထင် တွေ့ရှိလိုက်ရတယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ ဂုဏ်ယူထင်ရှား လူသိများလှတဲ့ ကဗျာဆရာကြီး ရောဘတ်ဖရော့စ်ရဲ့ သင်္ချိုင်းအုတ်ဂူနဘေးမှာ ဒူး ထောက်လို့ အသိအမှတ်ဂါရ၀ပြုနေတဲ့ဓါတ်ပုံကို တွေ့လိုက်ရတာပါ။ ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ရင်း အတွေးများက တနံတလျားပေါ့။ ရောဘတ်ဖရော့စ်ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ။ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲ။ မောင်စွမ်းရည်ကရော ဘယ်သူလဲ။ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ဆရာ မောင်စွမ်းရည်ဟာ ဘာဖြစ်လို့ ဆရာကြီး ရောဘတ်ဖရော့စ်ရဲ့ အုတ်ဂူကိုမှ သွား ရောက်ရတာလဲ။ ဂါရ၀ပြုရတာလဲ။ တဆက်တည်းမှာ ဗမာပြည်က အထက်အညာဒေသသား ဆရာမောင်စွမ်းရည် ဘာ့ကြောင့် အမေရိ ကန်မြို့ကြီးမှာ ရောက်ရှိသောင်တင်နေပြီး ပြည်တော်မပြန်နိုင်ဖြစ်နေရပါသလဲဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ပေါ့။ အမေရိကန်က ကဗျာဆရာကြီး...
အောင်ခိုင်မြင့် စက်တင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၂ အိမ်အလွမ်းဒဏ်ရာကို အနာလည်းရှိ ဆေးလည်းသိရဲ့သားနဲ့ မေ့ဆေးပေးပြီးမကုပဲ ပစ်ထားခဲ့တာ ကြာပြီ …။ မျှော်နေမဲ့အမေအိုဟာ တရားဓမ္မနဲ့မွေ့လျော်ရမဲ့အစား သားပျောက် သမီးပျောက်ရှာရင်း၊ သောကမီးတောက်နဲ့ ဗျာများနေမယ်မှန်းလည်း သိတယ် .. ဒါပေမဲ့ အမှန်တရားကိုရှာရင်း အမှားတရံကို ဖိနပ်လိုစီးတဲ့ (၂၄) နှစ်……။ ခွဲခွာခဲ့ အလင်းမဲ့အတိတ်ရထားကို ပြန်စီးစဉ် လူမြင်မခံဝံ့တဲ့ မျက်ရည်တွေ သွေးတွေ သမိုင်းစာမျက်နှာပေါ် မြစ်လိုစီးဆင်း ယုံကြည်ချက် ဒုက္ခတွေနဲ့ စီးချင်းထိုး ဘ၀တိုက်ပွဲ မတရား ဆုံးရှုံးမှုများ ဥပဒေမဲ့တောလမ်းပေါ်မှာပြန့်ကျဲခဲ့တယ် ….။ လူငယ်ဘ၀တွေ တောနက်နက်မှာ စတေးခဲ့တာတောင် မျက်နှာကို တံတွေးထွေးခံရတဲ့ (၂၄) နှစ် …။ ကြယ်ရောင်ပျောက် ကောင်းကင်အောက် အမှောင်ကျေးလက် ဗန်ဂိုးပန်းချီကားလို အနုပညာ...
နိုင်ဦးညို (ဖိုးဇီးရိုး) စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၂ Design – Ko Myoe ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း အထူးဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း မိသားစုနှင့်အတူ ထပ်မျှကြေကွဲခြင်း သူငယ်ချင်း မင်းသွားနှင့်တော့ ငါတို့လိုက်ခဲ့မယ် ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ ရှစ်လေးလုံး ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် ပေးပို့ခဲ့ကြတဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း သဝဏ်လွှာများကို ကြေကွဲခြင်းများစွာဖြင့် ရှစ်လေးလုံးမိသားစုမှ ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြန်ကြားအပ်ပါတယ် …။ ရှစ်လေးလုံး နာမကျန်းဖြစ်နေစဉ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ယခု ၂၀၂၀ ခုနှစ်ထိ အထူး ဂရုစိုက်ကြပ်မတ်ကုသပေးခဲ့သော နှလုံးရောဂါကုအထူးကုဌာန (ရှစ်လေးလုံး ပြန်လည်ထမြောက်ရှင်သန်ရေးအဖွဲ့ချုပ်) အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ………………………………………………………………………………………………. မောင်ရှစ်လေးလုံးသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ် သူ ငယ်ရွယ်နုပျိုစအရွယ်မှစ၍ ယခင်ဘဝ ရှေးကုသိုလ်ကံ အဆက်ဆက်ကြောင့် သူ၏...
ပြေ (ဆေး – ၂) စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၂ မြို့လေးကို ခွေးတွေနေတဲ့မြို့ဟုခေါ်သော်ရလေ၏။ အဘယ့်ကြောင့်မူ တမြို့လုံး အိမ်တိုင်းလို လိုပင် ခွေးအမျိုးမျိုးမွေး ထားကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ခွေးတွေက အမျိုးကောင်းသားတွေဖြစ်သည်။ ဟိုဘက်နိုင်ငံက စိနတွေသည် စီးပွားရေးနှင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာ သည်နှင့်အမျှ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို တယုတယမွေးမြူလာခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အချို့သောစိနတွေကတော့ ထိုချစ်စရာ့ ခွေးလှလှ လေးတွေကို လှောင်အိမ်လေးတွေထဲတွင်ထည့်ကာ စားသောက်ဆိုင်တွင် အဆင်သင့်ပြထားတတ်ကြလေသည်။ စားချင်သောက်ချင်သူတွေ က သူတို့စားချင်သည့် ခွေးလေးတွေကို လက်ညှိုးထိုးပြကာ ခွေးသား လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြော်၊ ခွေးသားဟော့ပေါ့ဖြင့် မော်ထိုင်း အရက်ကို မျှောချကြလေသည်။ သည်လိုရက်ရက်စက်စက် သတ်စားရက်သည့်သူတွေရှိ သလို ခွေးချစ်သူတွေအဖွဲ့ တိရိစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ရေးအဖွဲ့တွေကလည်း လိုက်လံကန့်ကွက် တားဆီးနေခဲ့ကြလေသည်။ ထိုထိုသော...
Design Oo Thandar Blog ဒီနေ့ တလစာ အသေးသုံးငွေ ထုတ်ပေးတယ်။ အသေးသုံးငွေရတော့ အပြေးအလွှား ဆံပင် သွားညှပ်လိုက်တယ်။ လိုအပ်တာတွေ ဝယ်လိုက်ရင် ဆံပင်မညှပ်ဖြစ်မှာ စိုးလို့။ ဆံပင်က သိပ်မရှည်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆံပင် လက်တဆစ်လောက်ဆိုရင် လူက ညှပ်ချင်လာပြီ။ ဆံပင်ညှပ်တော့ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်က တိုတိုညှပ်မယ်မလားလို့ မေးပါတယ်။ အင်း ပေါ့။ ဆံပင်ညှပ်ရင်း ငယ်က ဆံပင်ညှပ်တဲ့ အကြောင်းကို သတိရလာတယ်။ အိမ်က တလတခါ ဆံပင်ညှပ်ခိုင်းတယ်။ လူက ဟိုရင်ခုန် … ဒီရင်ခုန် … အရွယ်ရောက်စဆိုတော့ ဆံပင်ကို တိုတို မညှပ်ချင်ဘူး။ ဘိုကေကို ဒေါက်ရှည်ရှည်နဲ့ ညှပ်လိုက်တယ်။ သွေးတိုးစမ်းတာ။ အိမ်ရောက်တော့ အိမ်ရိပ်တောင် မနင်းရသေးဘူး အမေက...
Page 528 of 563«1...526527528529530...563»